Fambolena sy famokarana zavamaniry batterie vita pirinty Sina Jusheng
Conveyor an'ny zavamaniry Concrete Batching
Plant Mixing Concrete Batching
Vonona Mix Mix Concrete Batching Plant
Ny HZS series mixing plant dia zavamaniry matanjaka sy mahery vaika izay afaka mamokatra karazana simenitra isan-karazany. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny famokarana avo lenta, dia be mpampiasa amin'ny fananganana trano lehibe sy salantsalany, injeniera axial amoron-dalana ary ozinina ilaina hamokarana vokatra mivaingana. Izy io dia fitaovana mety amin'ny famokarana beton ara-barotra. Ny rafitry ny fampifangaroana azy dia mandray mixeur tsy maintsy atao amin'ny zoro kambana, izay misy fitoviana amin'ny fampifangaroana tsara, fotoana fohy fampifangaroana, androm-piainana maharitra anaovan'ny faritra, ary asa sy fikojakojana mety. Izy io dia mandray ny teknolojia fanaraha-maso farany indrindra toy ny rafitra fandanjana elektronika, fanaraha-maso ny solosaina ary fampisehoana nomerika. Fitaovana fandanjana elektronika dia miaraka amin'ny fitaovana buffer sy ny tambiny fanonerana mandeha ho azy, miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Ny rafitra famahanana fasika sy vatokely dia mampiasa fehikibo herringbone lehibe ho an'ny famahanana ary misy sisin-dàlana. Safidy mety indrindra ho an'ny singa marobe fananganana hamokatra simenitra tsara indrindra.
Ny DKTEC dia afaka mamaly mora foana ny filan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny zavamaniry mampifangaro simenitra misy fahaiza-manao sy famaritana samihafa.
Izy io dia manana karazana fitaovana fanaovana beton vita amin'ny beton, ary ny fahafahan'ny famokarana mixer dia manomboka amin'ny 60m³ / h ka hatramin'ny 180m³ / h. Azontsika atao koa ny manamboatra vahaolana arakaraka ny filan'ny mpanjifa, ny mailakay: sales@dongkunchina.com
Ho fanampin'izany, ao amin'ilay orinasa fampifangaroana vita amin'ny beton ihany miaraka amin'ny mixeur roa, ny fahafahan'ny famokarana dia mety hahatratra 240 metatra toratelo / ora sy 360 metatra toratelo / ora.
Famokarana teoria m³ / h 25
Fivoahan'ny mixer m³ 0,5
Karazan-tsakafo Hopper manainga
Modely Batcher m³ PLD800
Batcher (volume isaky ny tavoahangy) m³ 3
Batcher (bins vola) PC 4
Herin'ny mixer KW 18.5
Hery manandratra KW 5.5
Haavo ny famoahana M 1.5 / 2.7 / 3.8
& araka ny marina
Fitaovana vovoka kg 300 ± 1%
Paompy rano kg ± 1%
Paompy manampy kg ± 1%
Famokarana teoria m³ / h 35
Herin'ny mixer KW 30
Hery manandratra KW 7.5
Fitaovana vovoka kg 500 ± 1%
Batcher (volume isaky ny tavoahangy)
Batcher (bins vola)
Herin'ny mpampita fehikibo mifangaro
Haavo ny famoahana
Ny lanjany manontolo
Lafiny (L × W × H)
Max milanja ny fahamarinana aggregate
Max milanja ny fahamarinana
HZS andian-jiro fampifangaroana simenitra dia misy ny rafitra fampifangaroana, ny rafitra famonoana materialy, ny rafitra fandanjana ary ny rafitra fanaraha-maso elektrika. Izy io dia mety amin'ny tranokala fananganana lehibe sy kely, zavamaniry vita amin'ny beton precast ary zavamaniry famokarana.
Twin shaft beton mixer dia manana fahaizana mifangaro mahery, kalitao fampifangaroana sy famokarana avo. Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny fampifangaroana amin'ny beton miaraka amin'ny hamafin-dry maina, henjana semi-maina, plastika ary refy isan-karazany. Ny rafitra fanosorana sy ny rafitra mpamily zana-kazo lehibe dia avy any amin'ny fonosana tany am-boalohany, ary ny mekanisma fanokafana varavarana hydraulic dia afaka manitsy ny fisokafan'ny varavarana famoahana araka ny takiana. Ny vatan-kazo mifangaro ao amin'ilay milina fampifangaroana lehibe dia mampiasa teknolojia fanoherana ny adhesion mba hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fanangonana simenitra ilay hazo. Ny tombo-kase farany hazo dia mampiasa rafitra famehezana maro tsy manam-paharoa mba hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fivoahan'ny rihitra sy hiantohana ny fiasa maharitra sy maharitra an'ny rafitra fampifangaroana manontolo. Ny rafitra fanadiovana dia manara-maso ny fanaraha-maso mandeha ho azy ny paompy avo lenta ary ny fifehezana ny tanana, ny lavaka fivoahan'ny rano dia miorina eo ambonin'ny spindle fampifangaroana, izay manatsara ny fahaizan'ny mifangaro, mampitombo ny zavona, mampihena ny fahalotoan'ny vovoka ary manala amin'ny fomba mivaingana ny fanangonana simenitra. Izy io dia mety amin'ny fananganana lehibe, orinasa vita amin'ny beton-barotra sns.
Mixer vita amin'ny beton-barika kambana
Misafidiana milina famonoana; ny mekanisma famahanana dia alamina amin'ny endrika "vokatra" ary omen'ny mpampita fehikibo; izy io dia mandray fomba roa amin'ny lanjan'ny fitaovana tsirairay sy ny lanjan'ny fitaovana mitombo; milanja elektronika, fanaraha-maso PLC, fampirantiana dizitaly; t manana fandanjana marina, famaritana avo lenta, hafainganam-pandeha, fanaraha-maso matanjaka, fandidiana mora, sns.
Ampiharo ireo singa nafarana, fampisehoana azo antoka; fitantanana lavitra, zon'ny mpampiasa dia azo tendrena, hahatratra ny dingana fitantanana ny tetik'asa fototra; fifehezana manan-tsaina, fanaraha-maso mandeha ho azy, fanaraha-maso amin'ny tanana amin'ny iray; miaraka amin'ny fitehirizana tahan'ny, onitra mitete ho azy, mihoatra ny refy, fanitsiana fanairana ambanin'ny ambaratonga; Ny fitaovana dia manana fiasa toy ny fanaraha-maso ny fandidiana, fitahirizana rahona data, fanontana sns.
Ny vovo-tany, ny rano ary ny zavatra ampiana dia refesina amin'ny mizana elektronika; avo ny fahamendrehan'ny fametahana ary marina ny fandrefesana; ny simenitra, lavenona manidina ary hoppera fandrefesana rano dia tohanan'ny rafitra sensor telo karazana izay manana rafitra milamina sy azo itokisana; ny hopper metering additive dia refesina amin'ny sensor manandratra tokana
Ny zavamaniry mifangaro tsirairay dia namboarina manokana ho an'ny mpanjifa!
Miovaova ny vidin'ny zavamaniry milina tsirairay noho ny fikirakira samihafa!
Raha mila mahafantatra ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny vidin'ny tobim-pifangaroana kely ianao dia afaka miantso mivantana ny laharana fivarotana: 0086-571-88128581
Araka ny fanaingoana ilainao, dia hanome teny namboarina marina izahay ary avelao ianao hahazo ny vaovao ilainao ao anatin'ny fotoana fohy!
Fikojakojana ny mixer beton
1.Ataovy madio ny milina sy ny manodidina.
2. Esory ny fitaovana voangona ao anaty hopper ara-potoana mba hiverenan'ny sensor ho aotra ara-dalàna.
3.Zahao raha ampy ny menaka fanosotra isaky ny teboka fanosorana, ary tokony hihazona menaka ampy ny menaka fanosotra ao amin'ny rafitra rivotra.
4.Zahao raha nafana be ny motera sy ny fitaovana elektrika na ny tabataba tsy mahazatra, na ara-dalàna ny tondro, na ny rafitra famantarana na tsia.
5. Jereo sy ahitsy ny varingarina, ny valizy lolo ary ny valizy solenoid matetika mba hahafeno ny fanokafana sy ny fanidiana ny fepetra takiana.
6. Jereo matetika ny rafitra tsirairay, ary araraoty ara-potoana raha toa ka misy fivoahan'ny vovoka, famoahana entona, famoahana solika ary famoahana herinaratra.
7.The mixer sy hopper hopper dia tokony diovina isaky ny adiny efatra mba hisorohana ny simba sisa tavela amin'ny fanamafisana sy ny fanakanana ny asa mahazatra.
8.Every isaky ny fiovana dia tokony hamoaka ny rano anatiny ny compressor rivotra, tanky fitahirizana rivotra sy sivana, ary hanafoana ny tsy fetezana mitranga mandritra ny fiasa.
9.Ny valizy lolo, mixer, valve solenoid, sivana rivotra ary fitaovana zavona menaka dia tazonina mifanaraka amin'ny torolàlana mifandraika amin'izany.
Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonana mitambatra, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy,